makube khona i-hue: izinhlelo zokusebenza ezinhlanu ezihamba phambili zokushintsha umbala esitolo sokudlala
none Izindaba Nokubuyekezwa Makube khona i-hue: izinhlelo zokusebenza ezinhlanu ezinhle kakhulu zokushintsha umbala ku-Google Play Isitolo
Makube khona i-hue: izinhlelo zokusebenza ezinhlanu ezinhle kakhulu zokushintsha umbala ku-Google Play Isitolo
Osukwini lwanamuhla, izingcingo eziningi ze-Android zisebenzisa ukukhanya kwe-LED enemibala eminingi ngaphambili, ekhanya lapho kunokuthile okudinga ukunakwa komsebenzisi, okuvame ukuba nombala ohlukile, kuya ngohlobo nokubalulekile kwesaziso. Vele, ngabe i-Android ingaba yini uma abathuthukisi bengazange benze izinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezikuvumela ukuthi wenze ngezifiso i-LED yakho yefoni ukukhanyisa imibala oyithandayo?
Esikhathini esithile emuva, sakhuluma ngokuhlela imibala yezaziso zefoni yakho ye-Android nge usizo lokusebenza Flow Light , kepha akuyona ukuphela kohlobo lwayo laphaya. Ngakho-ke, senze ukumba okuncane, sibheka izinhlelo zokusebenza ezikhanyayo, ezinokwethenjelwa, noma ezicebile ezivumela abasebenzisi ukwenza ngezifiso imibala yabo ye-LED futhi size nalamagugu ayisihlanu, ngalinye linamandla nobuthakathaka balo. Thola i-fave yakho futhi usazise uma konke kusebenza ngokulungile!
Landa (inguqulo yamahhala)
Mhlawumbe uhlelo lokusebenza olwaziwa kakhulu phakathi komhlambi, i-Light Flow empeleni yenza umzamo wokusebenza kunoma iyiphi ifoni ongahle ube nayo, ngezilungiselelo zayo ezikhethekile ze-HTC- ne-Galaxy S3, noma ibhokisi lomaka lamadivayisi adinga impande ukuvumela i-LED- ukufinyelela.
Ukugeleza kokukhanya kusinika nokulawulwa kokukhanya kwe-LED, kulokhu ngezinyathelo eziyi-10 zokuhleleka kahle, futhi kuzovumela nemodi yokushintshanisa, icwayize idayode kuyo yonke imibala ehlukile yezaziso ezitholiwe. Kodwa-ke, izophinda futhi isivumele imodi Ebaluleke kakhulu, ezocwayiza umbala kuphela, emele into ebaluleke kakhulu esilahlekile (futhi okubaluleke kakhulu, okwenziwe ngokwezifiso).
Uhlobo lwe-pro Flow Light ($ 2.49) lusekela uhlu olukhulu lwezinhlelo zokusebenza, ngakho-ke uma uluthanda - ungahle uthande ukucabanga ngokukhipha amakhokho.
Isiphathi Sokukhanya - Izilungiselelo ze-LED
Sithanda ngempela iMenenja yokuKhanya - inemenyu elula kakhulu, kepha ebonakalayo kakhulu ukuthi yimuphi umbala onikezwe lokho kwaziswa. Izilungiselelo zayo ezijwayelekile zizovumela abasebenzisi ukuthi bakhethe izinyathelo ezintathu zokukhanya, lapho befisa khona i-LED yabo ukuthi ikhanye, basethe ukubambezeleka kokukhanyisa i-LED ngemuva kokutholwa kwesaziso, futhi babambe ngesandla imibala ehlukile (ngekhodi ye-hex), uma kwenzeka i-LED yabo ethile ingaziphathi kahle ngokwenziwa kabusha kombala.
Ukusetha isaziso somuntu ngamunye kuzovumela umsebenzisi ukuthi akhethe umbala okhanya kuwo, izinga elikhanyayo (kusuka njalo kuye kumasekhondi ama-5 phakathi kokucwayiza), futhi ubavumele babele oxhumana nabo abathile imibala yabo. Ngokwengeziwe, uhlelo lokusebenza lungasekela izaziso kusuka kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza olufakwe kufoni eyodwa ye-apos - into abasebenzisi abavame ukukhononda ngokushoda kwezinye izinhlelo zokusebenza ezinjalo.
Ibuye ibe ne 'Imodi eshintshanayo', ekhanyisa i-LED ngemibala ehlukene, ehambelana nazo zonke izaziso ezahlukahlukene ezidinga ukufundwa.
Izaziso ze-LED Blinker
Yebo, lokho & apos; s umlomo. Izaziso ze-LED Blinker zihamba kancane futhi zinzima emaphethelweni, kepha sisathanda ukuthi zonke izaziso ziboniswa kanjani ngokusobala ohlwini ngaphambi kwamehlo ethu, nokuthi sivunyelwe ukwenza ngezifiso izibani zethu ku-RGB.
Lezi zilungiselelo ze-apos zizokuvumela ukuthi ulungise ukukhanya kwe-LED ngesilayida sephesenti, usebenzise isikrini sefoni njenge-LED eyimbumbulu, setha i-blink rate, noma uphinde uphinde umsindo / ukudlidliza kwezaziso.
Manje, inguqulo ye-lite igcwele izikhangiso futhi ikhawulela izinhlelo zokusebenza, izaziso zazo i-LED Blinker ezokuxwayisa ngakho, kepha kusafanele ukuzama. Inguqulo ephelele izokubiza u- $ 2.35.
Lolu hlelo lokusebenza olunamahloni luneziphazamiso ezimbili - incazelo yalo esitolo sokudlala kakhulu 'laphaya', futhi iqinisekiswe ukuthi ayihambisani ne-HTC One (M8).
Ehlangothini le-flip - i-MyLED ilula kakhulu futhi iqondile - lapho uyethula, uzokwethulwa ngazo zonke izinhlelo zokusebenza ezifakiwe njengamanje kudivayisi yakho. Khetha eyodwa yazo futhi uzomiyiswa esikrinini esinamasondo e-RGB, okuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso umbala wezaziso ezivela kulolu hlelo lokusebenza ngqo.
Uhlelo lokusebenza lumahhala ngezikhangiso eziningi futhi alunayo inguqulo ekhokhelwe, ukuze lokho kungakucasula kancane.
Isixazululo esihle impela, kodwa esisebenzayo, samahhala, nesingenazikhangiso. Ikuvumela ukuthi ungeze noma yiluphi uhlelo lokusebenza onalo kudivayisi yakho bese usetha umbala we-LED nesilinganiso sokucwayiza sezaziso zayo.
Ibuye ibe nemodi yokulala nohlu olumnyama, ngoba noma nini lapho ungafisi ukuthi i-diode ikhanye. Akukho okunye okuningi ongakusho ngalena - kungcono kakhulu kunenqwaba. Ngakho-ke, uma nje ufuna ukubamba uhlelo lokusebenza oluncane bese ushintsha ngokushesha zonke izibani zakho zezaziso zibe pink - mhlawumbe lokhu kungukukhetha okuhle kakhulu.
enkulu kunazo zonke ezithwala amaselula
ungayikhubaza kanjani i-iphone ezenzakalelayo
Ungakucisha kanjani ukulungisa okuzenzakalelayo ku-iPhone naku-Android
Amadili amahle we-Black Friday iPhone 11, i-iPhone 11 Pro, ne-iPhone 11 Pro Max
Ama-headphone amahle kakhulu wokuthenga ngo-2020
Vuka uphunga lokho i-Rock okuphekayo ngohlelo lokusebenza lwe-Rock Clock alamu!
Nakhu ukuthi amakhasimende amasha nekhona we-AT & T angonga kanjani kufika ku- $ 250 njengamanje
Ama-AT & T & apos; avuselelwe i-Samsung Galaxy Note 4 ayakhunjulwa ngenxa yamabhethri mbumbulu
Iziphesheli ezihamba phambili zoSuku lweSikhumbuzo kuma-smartphone
Ukuhlolwa kwenethiwekhi ye-Verizon & apos; 5G eNew York City: nazi izivinini eziphezulu esizitholile
Isizukulwane sesithupha i-Apple iPod nano ayisasekelwa yi-Apple
Izivikeli zesikrini samafilimu nezingilazi ezihamba phambili ze-Galaxy S9 ne-S9 +